Ọzụzụ Ndị Ọkpụkpụ MOTAŞ Maka Ọzụzụ Ndị Ọgbọ Ọgbọ Ọgbọ njem ọha | RayHaber
Homeụgbọ okporo ígwèE nyere ndị ọkwọ ụgbọala MOTA ọzụzụ 'Traffic Training for Public Transport Drivers'
03 / 01 / 2018 ụgbọ okporo ígwè, General, Ụgbọ okporo ígwè Tire, Turkey
Malatya Ngalaba ndị uweojii na-ahụ maka okporo ụzọ ndị uweojii na-ahụ maka ụlọ ọrụ Metropolitan Municipality Traffic Training Park site na ndị uwe ojii were ụbọchị abụọ. N'oge ọzụzụ ahụ, a na-akọwa ụzọ nke okporo ụzọ na ndụ mmadụ na ihe ndị a ga-ewere megide ya na ihe ngosi dị iche na oge nke ihe mberede nke ejidere ya.
E kwuru na a ga-enwe okporo ụzọ na ebe mmadụ na nchebe ka e weere ka ha wee ghara ime ka ọdachi dakwasị okporo ụzọ ma gbochie ihe mberede ndị nwere ike ime. Onye ọkwọ ụgbọala ga-ebu ụzọ mepee ụzọ nke ụgbọala ya mgbe ọ rụchara ụgbọala ndị dị n'èzí na n'ime ụlọ ya, mgbe ọ banyere n'ụgbọala ahụ, ọ ghaghị idozi oche onye ọkwọ ụgbọala na enyo iji dabara ndidi ya ma pụọ.
A na-ahụ na ndị ọkwọ ụgbọala na-etinye usoro ịkwọ ụgbọala na-ekpo ọkụ mgbe ha na-akwọ ụgbọala na-enwe nsogbu nke ihe mberede. Enwere ike ịhụ ihe ize ndụ nke ihe mberede maka ndị na-ehi ụra, ndị na-enweghị nchekasị na ndị nkụda mmụọ dị elu.
"Ịghọta nghọtahie na nlezianya na-eme ka a kwụsị ọbụna"
Ndidi bụ ihe ngwọta kasịnụ nye ihe ize ndụ okporo ụzọ na ihe ize ndụ mberede. Enweghị nsogbu edozi site na ịlụ ọgụ n'oge na mgbe ihe mberede. Nghọta na obiọma na-edozi ọbụna enweghị ngwọta.
Ihe na-adịghị mma na-efe efe. Buru onye mbu iji gbochie oria nke ihe di iche iche ka i ghara imeri onye obula.
Motas Tamgac General Manager nke Anwar Sadat, ihe mberede mere na Turkey inwale nke na kwuru na ọnwụ nke ndụ na unan na mberede ma na-eso ndekọ ọnụ ọgụgụ ọmụma metụtara ihe onwunwe mebiri.
X 48% Mbelata na ọnụego mberede "
General Manager nke MOTAŞ; Göre Dị ka data TurkStat nke 2016; Ihe mberede 418 167 mere n'ime afọ ahụ dum na mba ahụ. 6 347 ha bụ ihe mberede. Ọnụ ọgụgụ nke ndị 7 300 gburu ndụ ha. Ọzọ 228 039 303 812 ndị mmadụ merụrụ ahụ n'ihe mberede nke ihe onwunwe. Nke a, nke na-abịa n'afọ ọ bụla, fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe efu nke mba nke si na agha ahụ pụta
Kaza Ọ bụ ezie na ọnụ ọgụgụ nke ihe mberede na-eme na mba ahụ ma tụnyere afọ 2015 gara aga ma ọnụ ọgụgụ nke ndị nwụrụ na ihe mberede ndị a nwere ike ibelata, nke a ezughị. Na mgbakwunye na ụzọ ọhụrụ, akara okporo ụzọ na akara, ọzụzụ ịkwọ ụgbọala dịkwa oke mkpa iji belata ọnụ ọgụgụ a. Anyị kwenyere na dị ka ọkwa agụmakwụkwọ na-abawanye na okporo ụzọ na okporo ụzọ na-abawanye mma, a ga-enwe ọnụ ọgụgụ dị nta n'ihe mberede ndị na-eme.
Ụlọ ọrụ anyị na-edu njem njem ọha na eze nke Malatya ma na-enye ọzụzụ na isiokwu dị iche iche n'oge ụfọdụ. Na nhazi ndị anyị na-enye, a na-enwe ọnụ ọgụgụ dị nta na ọnụ ọgụgụ ihe mberede metụtara ndị ọkwọ ụgbọala anyị kwa afọ. Mgbe anyị jiri ọnụ ọgụgụ nke ihe mberede metụtara 2015 na 2016, anyị na-ahụ ọnụma nke 13%. Ọzọkwa, mgbe anyị jiri ọnụ ọgụgụ 2015 mee ihe na 2017, anyị na-ahụ na anyị enweela mmụba nke 48%. Ọ bụ ezie na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ihe mberede ndị metụtara ndị ọrụ anyị dị, anyị echeghị na nke a zuru oke. Ebumnuche anyị iji belata ọnụ ọgụgụ a.
Anyị ga-anọgide na-azụ ọzụzụ nke ndị ọrụ anyị iji mee ka ọrụ ọrụ anyị na-enye ndị njem anyị dịkwuo elu na iji belata ọnụego ndị ọghọm ".
Mkpa Ahụike na Nchekwa maka MOTAŞ Ọrụ…
Ọzụzụ ụgbọ okporo ígwè maka ndị ọkwọ ụgbọ ala na Ankara
Iwu usoro iwu maka ndị ọrụ na obodo Elazig…
MOTAŞ gara n'ihu n'ịzụ ndị ọkwọ ụgbọ ala
Akwụkwọ nke iru eru maka ndị ọkwọ ụgbọala Metrobus
Ndị ọkwọ ụgbọ njem ọha na eze maara na Kocaeli
MOTAŞ njem njem ọha na eze bụ omenka…
Nnyocha nke ndị ọkwọ ụgbọ njem ọha na Mersin…
İZBAN na-eme ka 2017 dị ka onye njem